आजदेखि तिहार सुरु ,यमपञ्चकको पहिलो दिन कागको पूजा गरिँदै « Himal Post | Online News Revolution
आजदेखि तिहार सुरु ,यमपञ्चकको पहिलो दिन कागको पूजा गरिँदै
प्रकाशित मिति : २०७४, ३१ आश्विन ११:०९
काठमाडौँ, असोज ३१ गते ।
कार्तिक कृष्ण त्रयोदशीका दिन मङ्गलवारदेखि तिहार पर्व सुरु हुँदैछ । यमपञ्चकको पहिलो दिन कागलाई परिकार भोजन गराएर कागको पूजा गरिँदैछ । कागपूजादेखि पाँच दिनसम्म यमराज मत्र्यलोकमा विचरण गर्न आएका हुन्छन् भन्ने मान्यता छ ।
कागले यमराज र बहिनी यमुनाबीच सूचना आदानप्रदान गरेको प्रसङ्गलाई यही दिन संस्मरण गरिन्छ । कागलाई यमदूतका रूपमा पूजाअर्चना गरिन्छ । कागलाई भोजन गराउँदा भोजन सिधै पितृले पाउँछन् भन्ने ज्योतिषीय मान्यता रहेको डा. सुनिल सिटौला बताउनुहुन्छ । डा. सिटौलाका अनुसार पूजाका दिनबाहेक अन्य दिन पनि कागलाई भोजन गराउँदा पितृ तृप्त हुन्छन् ।
निकै चतुर पक्षीका रूपमा कागलाई लिइन्छ । यसै दिन आयुर्वेदका प्रवर्तक धन्वन्तरी जयन्ती परेकाले जयबागेश्वरीस्थित धन्वन्तरी पीठमा अर्चना गरेर मनाइँदैछ । यसै दिन मुलुकभर आरोग्य दिवस मनाउने गरिएको छ । बाग्मती अञ्चल आयुर्वेद औषधालयले जयबागेश्वरीस्थित धन्वन्तरी पीठमा पूजा आयोजना गरेको छ ।
यसै गरी आयुर्वेद क्षेत्रका सङ्घसंस्थाले धन्वन्तरीको पूजा गर्दै आरोग्य दिवस मनाउँदैछन् । जयबागेश्वरी निवासी समाजसेवी ज्येष्ठ नागरिक मुकुन्द वैद्यका अनुसार यहाँका वैद्यले परापूर्वकालमा रावणको उपचार गरेको भनाइ छ । त्यसैले यहाँको पीठमा धन्वन्तरीको अर्चना हुँदै आएको छ ।